Pope Francis maliteghachiri ndị mmadụ n'ozuzu ya na ndị mmadụ | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Pope Francis weghachiri ndị na - ege ntị n'ozuzu ha
di Paolo Tescione - Ọgọstụ 27, 2020
Ndị ọha na eze ga-enwe ike ịga nzukọ ndị isi Pope Francis ọzọ site na September 2 mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa isii n'ihi nsogbu coronavirus.
Onye isi nke Papal Household kwupụtara na August 26 na a ga-eme Pope na-ege ntị n'ozuzu ya na Wednesde na-abịa "n'ihu ndị kwesịrị ntụkwasị obi".
O kwuru na a ga-enwe ntị na Cortile San Damaso nke Palacelọ Apostolic na Septemba niile, na-agbaso ndụmọdụ ndị isi na-anwa igbochi mgbasa nke coronavirus.
A na-enwekarị ọha mmadụ na St. Peter's Square ma ọ bụ na Paul VI Hall. Ma mgbe ọrịa a dakwasịrị Italytali na Machị, popu kpaliri ndị ọhaneze ya n'ọbá akwụkwọ nke Palacelọ Apostolic, ebe ha mere na-enweghị ohere ọha na eze.
Ọbá akwụkwọ mbụ ndụ-streamed n'ozuzu na-ege ntị mere na 11 March.
Seelọ ọrụ mgbasa ozi nke Holy See kwuru na mkpebi ahụ "dị mkpa iji zere ihe egwu nke ịgbasa COVID-19 n'ihi nchịkọta nke ndị mmadụ n'oge nyocha nke nchekwa maka nnweta na square ahụ, dị ka ndị ọchịchị requestedtali rịọrọ".
Onye isi ochichi ahụ kwuru na ndị mmadụ n'ozuzu na Septemba ga-amalite na 9.30 oge mpaghara ma "ga-emeghe ndị niile chọrọ, na-enweghị mkpa tiketi".
A ga-anabata ndị sonyere n'ogige ahụ site na 7.30 nke ụtụtụ site n'ọnụ ụzọ Bronze, nke dị n'okpuru oghere aka nri na St. Peter's Square.
Hastali ekwuola ikpe 261.174 nke COVID-19 na 35.445 metụtara ọnwụ ka August 26, dị ka Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.